Indawo Yentuthuko | Ukulungiswa Kwezimoto Zase-Outboard
Amazwana mayelana nale sayithi nenqubekela phambili engiyenzayo, kanye nezimbungulu engizidingayo ukuze ngizilungise.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 06 / 05 / 2017 - 20: 12
Popular isiqophi Khasi Amazwana amakhasi
Ngifake nje okusha Amavidiyo Ikhasi kanye neziningana Izigaba zamazwana....... Tom
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Sun, 11 / 05 / 2017 - 13: 32
Izingxenye, izingxenye, izingxenye
Isibuyekezo nje. Yize kungahle kungabonakali njengokuningi ngaphezulu, bengilokhu ngimatasa ngifaka izingxenye ku-database yesayithi. Anginalo lolu lwazi ngohlobo lwe-elektroniki, ngakho-ke kufanele ngilufake ngendlela yakudala.
Njengamanje, uma ubheka izinjini ngaphambi kuka-1980, ubona uhlu lwezingxenye zaleyo moto, uma lutholakala. Kuleli hlobo eledlule, ngifake wonke ama-motors e-Evinrude / Johnson / OMC / BRP kusuka ngo-1980 kuya kwamanje. Lo bekungumsebenzi omkhulu, kepha ngiwenze. Manje sengifaka zonke izingxenye eziseSierra Catalog futhi ngizozikhomba kuma-motors asebenza nawo, kanye nezixhumanisi ze-Amazon. Njengamanje ngifaka amasongo e-piston futhi ngisalelwe amanye amakhasi ayi-100! Ngikholwa ukuthi umphumela uzowufanele umzamo.
Ngibhala izinhlelo ezithile zenkambiso ukuze ngisize ngokubhekisela, kodwa kuqala ngidinga ukuthola zonke izingxenye zingena.
Ngibeke ukuxhuma kwi-2018 Sierra Catalog ukuze abantu bangabheka izingxenye engingazifakanga okwamanje.
Nginezinye izinkinga ezimbalwa zesayithi engifuna ukuzihlanza, kodwa okwamanje, ngifuna ukuthola zonke izingxenye zezingxenye ezifakiwe.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Sun, 09 / 30 / 2018 - 12: 14
Izingxenye eziningi nama Motors.
Ngisondele ekugcineni kokufanisa uhlu lwethu olude lwezingxenye nama-motors abasebenza nawo. Ngamanye amagama, ngifaka amatafula wokufaka ukuze kuthi lapho othile edonsa imoto yakhe, kuboniswe uhlu lwezingxenye ezifanayo zaleyo moto. Lokhu bekuwumsebenzi omkhulu kunalokho ebengikucabanga, kepha njengamanje nginamakhasi ambalwa wokugcina wokungena.
Ngenkathi ngizamile kanzima ukuthi nginembe ngangokunokwenzeka, ngokuqinisekile kukhona amaphutha athile. Uma ubona ingxenye ethile owaziyo ukuthi ayisebenzi nenjini yakho noma okuthile okudinga ukulungiswa, ngicela ungazise ngokuthumela ukuphawula lapha.
Ngifunde okuningi kule nqubo, ikakhulukazi okungasatholakali kwamanye ama-motors amadala. Ngiyethemba ukubuyela emuva ngiyokwenza ucwaningo ukubona ukuthi ngingazithola yini izixazululo ezingabonakali kangako. Noma yikuphi ukufaka noma iziphakamiso zamukelekile futhi zizosetshenziswa lapha ukuzuzisa abanye.
Manje njengoba sesinalo leli sayithi ngezilimi eziningi, kuyangimangaza ukuthi zingaki izivakashi esinazo ezivela ezindaweni eziseduze nokuthi zingaki izilimi abazisebenzisayo. Ngamukela wonke umuntu njengoba sonke sibonakala sinothando olufanayo ngezimoto esizisebenzelayo.
Nginemibono eminingi yokuthi ngingalithuthukisa kanjani leli sayithi futhi ngizobeka umzamo omkhulu kulo ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Izinto ezintathu engifuna ukuzengeza kusayithi ama-props, ama-spark plugs namabhukwana wensiza. Lezi yizinto abantu abaningi ababonakala bezifuna. Hlala ubukele futhi uqhubeke ubheka emuva.
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 10 / 25 / 2018 - 17: 33
Thenga izingxenye ku-eBay
Ngivele nganezela inketho ngayinye ngayinye ukuthenga leyo ngxenye ku-eBay.
Ngidlule kulo lonke uhlu lwezingxenye futhi ngangeza umbuzo ozoveza imiphumela. Kwesinye isikhathi bekufanele ngisebenzise amagama ayisihluthulelo ahlukene kanye / noma izinombolo zezingxenye ukuthola imiphumela emihle.
Phakathi nale nqubo, ngabuye ngabuye ngabuza imibuzo yama-Amazon ukuze bathathe abasebenzisi kwi-Amazon indawo yezwe labo.
Ngokusebenzisana ne-Amazon ne-eBay, ngibheka izingxenye ezifanayo ngakunye, kwesinye isikhathi ngibona umehluko wamanani amakhulu phakathi kwalezi zinto zombili. Kwesinye isikhathi i-Amazon izoba nentengo enhle kakhulu, kwesinye isikhathi i-eBay inenani elingcono kakhulu. Kunoma ikuphi, ungathola isivumelwano sakho esihle ngokubheka kuzo zombili.
Izingxenye eziningi ku-eBay azikho kwifomethi yendali. Intengo yakho ikhonjiswa njengentengo "Thenga manje", futhi ayikho inqubo yenqubo yendali.
Ngenkathi ngibheka zonke lezi zingxenye ku-eBay, ngithola umqondo wokuthi abantu abathengisa izingxenye zingabantu abafanayo ongabathola emnyangweni wezingxenye kubathengisi bezinsizakalo nasezitolo zasolwandle. Bathola nje indlela entsha yokuthengisa imikhiqizo yabo kwi-Intanethi. Ngibukeka ngiba nenhlanhla engcono yokuthola okungajwayelekile futhi okunzima ukuthola izingxenye ku-eBay.
Into eyodwa engiyifundile yigama elithi "NOS" elisho "i-New Old Stock" okusho ukuthi kusesimweni esisha kodwa uhlale eshalofini iminyaka eminingi. Lokhu kuhumusha into enhle kuwe.
Uma ngibheka phambili, ngifuna ukuhlinzeka ngama-propeler akhethiwe kumoto ngayinye, kanye namabhukwana ezinsizakalo, nama-spark plugs. Lapho senginakho konke lokhu, ngifuna ukubuyela emuva kuma-motors bese ngifaka imininingwane mayelana nemoto ngayinye mhlawumbe namazwana angeziwe.
Ngithemba, ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo, ngizophinda ngiphinde ngiphendule leli sayithi elinguJohnson / Evinrude / OMC / BRP futhi uqale ngeMercury / Yamaha nezinye izinto zamamori.
Njengoba njalo, ngiyazisa imibono yakho kanye nempendulo yakho.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Wed, 06 / 12 / 2019 - 16: 44
Ukusebenza ngokugcwele kusayithi.
Sekuyisikhathi ngishilo noma yini ekuphawuleni kokuqhubeka kwesiza, kepha lokho akusho ukuthi angizange ngibe matasa. Ngisanda kufaka ama-spark plugs wemikhiqizo eminingana ngaphandle kukaJohnson / Evinrude. I-Spark plugs yeminye imikhiqizo kungaba uphawu lwakho lokuqala lokuthi Siseduze ngokuphelele noJohnson / Evinrude futhi sikulungele ukudlulela eMercury, Yamaha, Honda, futhi mhlawumbe nangaphezulu.
Njengamanje ngilungiselela ukufaka iziphephela. Ngangihlala ngikhungatheka lapho ngithenga ophephela bezimoto zami ngoba angikaze ngibe nendlela enhle yokwazi ukuthi yini yonke etholakalayo futhi ezosebenza kumoto yami. Ngizama ukususa isayensi ye-voodoo futhi ngenze ukukhetha okulula kube lula kakhulu njengoba ngenzile ngama-spark plugs.
Kade ngenza okunye ekusithekeni kwezigcawu. Okuqapheleka kakhulu ukuthi ukwengezwa kokuphepha kwe-SSL, ngakho-ke ikheli lamakhasi lonke liqala ngo-https: // ..... Ngaphandle kokuphepha kwe-SSL, abantu bazothola umlayezo osho into efana nokuthi "Leli sayithi alivikelekile," okungadumaza. Manje kufanele kube nokukhiywa okuluhlaza okuzovela kubha yekheli lesiphequluli sakho. Selokhu kwenziwa lokhu, ithrafikhi yesiza inyukile, ikakhulukazi ithrafikhi yamazwe omhlaba. Isithombe esingezansi sikhombisa lapho abantu bavakashele khona leli sayithi kusukela ngoMeyi wezi-2019. Ngicabanga ukuthi sithola izindaba zomhlaba wonke ngaphandle kwe-Afrika emaphakathi. Abantu emhlabeni wonke bathanda ukulungisa ama-motors abo angaphandle. Ngizwa ngabantu ababazisa isayithi elihunyushelwe olimini lwabo lwasekhaya.